Kamukira yeBhoot Boot Kushanda: Kuenda ku71% Kubva Makirasi Emisasa
musha » Groupon » Kamukira yeBhoot Boot Kushanda: Kuenda ku 71% Kubva Makirasi Okudzivirira Boot-Camp
Bhoot Boot Camp Inobata
Kubudirira Kwemagariro Kunopa Mukana weBhoot Boot Kubva kubva Groupon
Kusvikira ku 71% Kubva Kamudiki Kamudiki Komukati: Mwedzi Mumwe weChina kana 10 Madzimai-uye-Me Fitness Boot-Camp Classes
Pamusoro peBhoot Boot Camp:
Bhoot Boot Camp ndiyo chirongwa chekufambisa chechifambisi chinoshandiswa chinobatsira moms kuti adzoke kana kuwedzera huwandu hwehutano hwekuita pamuviri uye kusangana nematambudziko emumuviri wekubereka kuburikidza nekusimbisa simba rekudzidziswa mune zvakasikwa.
Groupon Has 2 Sarudzo Yokusarudza Kubva:
$ 39 kwemwedzi mumwechete wekugadzikana mami-uye-ini fitness boot-camp classes ($ 135 kukosha)
$ 59 ye10 mommy-and-me fitness boot-camp zvidzidzo ($ 125 kukosha)
Inopera mazuva 90 mushure mekutenga. Kunyoresa kunodiwa. Chiremera 1 nemunhu, anogona kutenga 2 zvimwe sezvipo. Ungadzikinura kunze kwekushanyira. Inongowanikwa chete nokuda kwezvaunotenga. Mutengesi ndiye oga ane mutoro wekutenga zvinhu zvekutarisira uye hutano hwezvakabudiswa zvinhu uye mabasa.
Click Here Kuti uone iyi Bhoti yeBhoot Camp Inoshanda Nhasi kubva kuBroupon!
* Iyi Kambani yeBhoot Boot Inoshanda yakakodzera seyomu 9 / 21 / 14 4: 30 AM EST. Mutengo wemiti uye kushandiswa kwakarurama sekune zuva / nguva inoratidzwa uye inogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo ruzivo rwakaratidzwa paGroupon.com panguva yekutenga ichashandirwa kurongeka kwako